Wipster: Vhidhiyo Kuongorora uye Kubvumidza Platform | Martech Zone
Tanga tichishanda neshamwari dzedu ku 12 Nyeredzi Media (marefu-nguva mafeni uye shamwari!) Vhidhiyo yemutengi. Iyo vhidhiyo yakaomesesa, inosanganisira intros, outros, b-roll, vhidhiyo yevatengi, uye mabvunzurudzo ese akaputirwa mumaminitsi mashoma anopfuura maviri.
Vakatumira pamusoro pekubatanidza kwatinogona kuwana vhidhiyo kuburikidza Wipster, vhidhiyo yekuongorora uye yekubvumidza chikuva. Iyo inonzwisisika kwazvo interface apo muoni wega wega ane mavara-akanyorwa uye anogona kupindura pane chero nzvimbo chero nguva mune yakatarwa nguva. Iyo interface inosanganisira yekukweva uye kudonhedza interface kune intuitively kurodha uye kugadzirisa ako mavhidhiyo.
Ipuratifomu ine yeku-ita runyorwa uko makomenti anoitwa otomatiki kuita mabasa uye anogona kuongororwa kubva. Iwe unogona zvakare kurodha pasi PDF kana kupurinda kopi yavo, kana kunyorera kune chiitiko chiitiko. Ipuratifomu zvakare inobvumidza iwe kuti ugadzire yakagovaniswa maforodha uye akavhenekerwa vashandisi kudzora kupinda pakati pevatengi kana kunyangwe avo vakakokwa kuti vapindure.
Ongorora uye Bvumidza kuburikidza neAdobe Premiere Pro
Iyo Wipster Ongororo Panel ye Adobe Premiere inoita kuti iwe utumire ako ekushambadzira kunze kune vatengi kuti vapiwe mhinduro pasina kusiya yako yekugadzirisa suite, nepo Wipster encode, kurodha, kugovera uye kuunganidza mhinduro kuseri kwezviitiko. Vabatsiri vanogona kutarisa sezvo makomendi acho achingoerekana aoneka seanomaka pane iyo Adobe Premiere Pro timeline.
Wongorora uye Bvumidza kuburikidza neMobile
Kana izvo zvisiri nyore zvakakwana, Wipster yakagadzirirwa nharembozha kuti ugone kuongorora, kupindura uye kubvumira vhidhiyo uchienda, uchishandisa chero chishandiso.
Mitengo yakanyanya nyore - ingori $ 15 pamushandisi pamwedzi. Zvinotora ese mashoma masekondi kuti utange.
Saina kumusoro kwemazuva gumi nemana mahara paWipster
Tags: adobe primeadobe premiereadobe premiere provhidhiyo yekubvumidza systemvhidhiyo kubatanamavhidhiyo akatauravideo reviewwipster